Daawo Turkiga oo safaarad Cajiib ah ka furtay Muqdisho. – Kismaayo24 News Agency
by admin 30th October 2015 30th October 2015 090
Ku simaha madaxweynaha ahna gudoomiyaha Baarlamanka Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaaqri” R/wasaaraha dalka Cumar Cabdi rashiid. wasiirro xildhibaanno iyo xubno ka socday ururada bulshada ayaa ka qeybgalay Xafladda xuska 92 guuradii ka soo wareegtay madaxbanaanida dalka Turkiga taasoo lagu qabtay xarunta dhismaha safaaradda cusub ee Turkigu ku leeyahay Muqdisho.
Ku simaha madaxweynaha ahna afhayeenka Baarlamanka Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” oo hadlay ayaa dowladda iyo shacabka Turkiga ugu hambalyeeyay munaasabadda xuska 92 guuradii ka soo wareegtay madaxbanaanida dalkaasi.
Guddiga farsamada ee maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Sh/dhexe oo la magacaabay
DEGDEG: Dagaal ka dhex qarxay ciidamada Somaliland iyo Jabhadda Wabar.
Akhriso: Puntland oo War Lama Filaan ah ka soo saartay Doorashada la Filaayo in Dhamaadka Bishaan ay ka dhacdo Muqdisho